Feellife Health Inc is an international enterprise specializing in researching, developing, manufacturing and marketing of portable mesh nebulizers. Our vision is to provide the 3rd way of dosing for human beings. FEELLiFE dia nahay ny fototra teknolojia ny nebulizer roa titane ONE Chip. Efa nahazo mihoatra ny 10 Patents ao amin'ny maneran-tany, nandalo ISO 13485 sy CFDS mari-pankasitrahana. Ary izahay mitarika foana tanteraka famokarana fotsiny fanajana ny fitsipi-taona sy ny FDA. Ny vokatra no tsara namidy tamin'ny firenena 50 mahery sy FEELLiFE dia nifidy ho toy ny azo antoka indrindra mpamatsy ny harato nebulizer.
R & D traikefa 9 taona
Nebulizer harato series 20+
Patents iraisam-pirenena 10+ Patents
fampirantiana ALAMINO MIALOHA
Moa ve ianao vonona ny hanafatra harato nebulizers?
Nampanantena ianao FEELLiFE faran'izay tsara voahevitra vokatra amin'ny mpanjifa.
jereo ny entana
Tonga lafatra sy milamina! Ampiasaina mba manana ny tabataba toy ny rivotra haihetsika compressor nebulizer. Izany no izao tontolo izao ny fahasamihafana. Miasa tsara, na kely na portable ary maharitra fitsaboana maro talohan'ny tsy maintsy recharge ny bateria.
Tena mety, mangina aho saika afaka hampiasa izany eo amin'ny birao ao amin'ny birao nefa tsy manelingelina na iza na iza. Miasa ary koa ny lehibe compressor nebulizer. Nentina teo amin'ny fiaramanidina. Anjara-raharaha maharitra. Mora foana ny mampiasa tanana na aiza na aiza. Tsy misy fitarainana. Recommend !!
Efa nampiasa io nebulizer kely eo ambanin'ny iray volana, ary hatreto tena faly aho izany. Nebulizer haingana izany ary tsy mitaky anao mandrakariva hisolo vatoaratra. Mora ny handidy ny fitsipika USB mampiasa tariby. Tsy mora koa ny madio. Tafiditra amin'ny iray taona iray Warranty. Antenaina fa tsy ho mila izany.
Milina ity dia natolotry ny dokotera fanafody Functional mba hitondra ny olana ateraky ny mitaiza bobongolo hatsiaka. Hoy izy nebulizers ny mahazatra zareo ka tsy mahavonjy fanafody toy ny lalina any amin'ny havokavoka. Izahay manana traikefa tsara izany hatreto.
Nividy izany noho ny rafozani-vavy izay efa voan'ny asma ho azy ny fiainana manontolo. Ary nitondra tena tsara zipper kitapo izay mitondra azy mora foana manodidina. Ny fitaovana tsara mihitsy atao. Very malama zavatra ivelany. Ve fahazoan-dalana mankany!
Nahazo izany ho lavitra. Tena miasa be.
Powered by mihoatra ny 4000 matoky antsika mpanjifa noho ny zavatra niainany mpanjifa tsara dia tsara.
Taona R & D Experience
sekely / andro
Series ny safidy
Récents Tips & News
hijery lahatsoratra hafa +